Last updated: May. 25 2019 | 1
Waan ognahay waxa muhiim ah in aad loo amaan bulshada, sidaas darteed waxaan rabay in aan waxoogaa waqti ah si aad ka war ammaanka online.
Raac dhowr dhibcood jeeg fudud oo aad ku yeelan doonaa in bacda!
Sirta ah waa in ay fududaato in la xasuusto inaad by, laakiin ku adag qof kasta oo kale in u malayn. Aad si fudud u xusuusan Magacyada, laakiinse siduu u fududahay indhaha prying inuu maleeyo!
Macluumaadka gaarka ah
Taariikhda My Butros wuxuu leeyahay hab la yaab leh xubin fariin. Ha ku degdegin inaad siiso macluumaadka wax xiriir ah ilaa aad diyaar kuna kalsoontahay. Ha u ogolaan qof aad riixdo. Qaado at hoosna ku faraxsan.
Haddii uu qof ku goobta weydiisto inaad soo amaahato lacag, tii qaylo dhaan waa in ay bilowdo inay wax ka wac. Ha siin qof lacag goobta, iyadoo aan loo eegayn sida wanaagsan sabab u muuqdo mid. Fadlan soo sheeg xubin kasta oo ku weydiisto lacag si Team Support kuwaas oo ku faraxsan in ay baaris ku sameyn doona.
Gunteedu waa in aad waa in had iyo jeer joogaan control. La kulan meel dadweynaha, sheeg qof goorta iyo meesha aad ku socoto, iyo diyaarin inuu iyaga ugu yeedho waqti la siiyo si loo xaqiijiyo waxa ay fiican. Haddii taariikhda waa istaahilaa, ay si buuxda u fahmi doonaa.
Inta badan dadka aad kula kulantid internetka ay noqon doonaan dadka dhab ah kaliya aad jeceshahay, kuwaas oo si fudud u raadinaya taariikhda ama saaxiibtinimada qaar ka mid ah. Inta aad raacdo xeerasha dahab ah iyo is ogow – hubno aad leedahay doonaa xiiso leh!
Xusuusnow, Taariikhda My Butros marnaba kuu soo diri doonaa wax e-mails waydiinaya wixii faahfaahin qof ahaaneed.